Fotoanan’ny Afomanga Any Japana Ny Fahavaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2015 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny Română , বাংলা, русский, Español, Magyar, Ελληνικά, Català, Italiano, English
花火 (Afomanga) tamin'ny “fetiben'ny afomanga mitsingevana” tany Kobe tamin'ny 2013. Sary avy tamin'ilay mpisera amin'ny Flickr Xiaojun Deng. Sary nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0.
Afomanga teo amin'ny tetezan'i Ryogoku, reniranon'i Sumida any Edo – Hiroshige. Loharanon-tsary : Wikimedia Commons.
Ambaran'ireo mpikaroka sasany fa avy amin'ny sampana miandraikitra ny fankalazana ny fahatsiarovana tamin'ny taonjato faha-17 tany Edo (Tokyo amin'izao fotoana) ho fahatsiarovana ireo matin'ny hanoanana sy ny valan'aretina kolera, ilay fomba fanao manan-danja, fampisehoana afomanga any Japana amin'izao fotoana izao.
Indraindray tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny O-Bon ny fampisehoana afomanga.
PLA Art-n'ny fetiben'ny afomanga, Tondabayashi, Osaka.